China JY-203E Amino silicone emulsion factory na ndị na-emepụta | Juyou
JY-203E bụ emulsion mmanụ n'ime mmiri nke polydimethylsiloxane aminofunctional, nke ndị na-enweghị emulsifiers na-akwụsi ike. Yabụ, ngwakọta nke JY-203E na emulsions ndị ọzọ ka a na-eme ka ọ dịrị n'ọtụtụ oge.
Ndepụta ahaziri ahaziri ngwaahịa
Ọdịdị mmiri ara ehi mmiri mmiri ọcha
Emulsifier na -abụghị
Ọdịnaya siri ike ihe ruru 63 %
Uru pH ihe ruru 8
Amine ọdịnaya ihe ruru 0.1 mmol/g
Ịkwakọba na mbupu
Nwuo nke ọma tupu ojiji.
1) ngwaahịa echekwara na plastik kpuchie 200kg dị ọcha, na -enweghị ikuku na plastik 50kg, etinye ya na ikuku, ebe kpọrọ nkụ.
2) ngwaahịa dị ka ngwongwo ndị na-adịghị ize ndụ na mbupu.
N'ime nchacha ụgbọ ala, dịka, na ntụ oyi, tee agba na ihe mkpuchi vinyl.
Na ndị na -ehicha ihe na agba
A na -eme ka ọkwa ọkwa na nchacha mma ka mma.
Maka imepụta ihe mkpuchi vinyl, n'ihi ọrụ polar nke emulsion na -arụ ọrụ, ihe nkiri polish na -echebe na -arapara nke ọma na elu mkpụrụ nke na -ebute njigide na ịdị omimi nke onyonyo a ka edobere ogologo oge.
Na mgbakwunye na emulsion dabere na polydimethylsiloxanes, dịka ọmụmaatụ, enwere ike idozi ihe ndị na -eme vinyl n'ihe gbasara gloss na ịdị omimi nke onyonyo.
Nke gara aga: JY-988 rọba silicone mmiri maka akwa
Osote: Emulsion mmanụ mmanụ JY-306
JY-206 hydroxy silicone mmanụ
JY-227 gbanwetụrụ silicone emulsion maka metal rel ...
JY-203 Amino silicone mmanụ